‘म डराएको छैन, प्रस्तावको सामना गर्छु’::KhojOnline.com
संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बित भएकी सुशीला कार्कीसंग नागरिककी भाषा शर्माले गरेको कुराकानी:
तपाईंमाथि लागेको महाभियोगलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मलाई त केही ‘फिल’ नै भएको छैन । ममाथि महाभियोग लाग्दैछ भन्ने मलाई थाहा थियो । केही दिनयता माओवादी सांसद (रामनारायण) बिडारीले मलाई पटकपटक फोन गरी कांग्रेसको दबाब आइरहेको छ, एकपटक भेट्नुप¥यो भनिरहनुभएको थियो । तर, मैलै भेट्न मानिनँ । बिडारीलाई मैले ‘महाभियोग लगाउनुहोस्’ भनेकी थिएँ । आनन्दमोहन (भट्टराई¬) लाई गरेजस्तै मलाई पनि गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले आजै बिहान पनि दूत बनाएर वर्षमान पुनलाई मेरो निवासमा पठाउनुभएको रहेछ तर मैले भेटिनँ । मेरो श्रीमान्सँग भेटेर उहाँ फर्किनुभयो । उहाँहरुले मलाई जे आरोप लगाएर महाभियोग दर्ता गर्नुभएको छ त्यो त उहाँहरुले पुष्टि गर्नुपर्छ । तर, मैले न्यायप्रतिको निष्ठा र इमान्दारीमा कहिल्यै सम्झौता गरेकी छैन । त्यसैले म यसबाट डराएकी छैन । म यो प्रस्तावको सामना गर्छु ।
भनेपछि महाभियोग लाग्ने कुराको संकेत पाउनुभएको थियो ?
तीनचार दिनअघि देखि नै थाहा थियो । प्रचण्डजीका दूत आएका थिए । उनीहरुले जे भन्यो त्यही गरिदिनुपर्ने ? त्यस्तो पनि न्यायालय हुन्छ ? मैले धेरै मुद्दामा दबाब सहिनँ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा त्यत्तिकै दबाब आएका थिए । महान्यायाधिवक्ताले सारा सरकारी वकिललाई चुनावमा पठाएर बहसमा नआउने बनाए। सरकारी वकिलको पनि भूमिका छ नि । महान्यायाधिवक्ता सरकारको सल्लाहकार हो । उनी सबैजसो भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला मुद्दामा विपक्षको तर्फबाट वकिल छन् । आजै सर्वोच्चबाट फैसला भएको सुडान घोटाला काण्डमा पनि उनी विपक्षीको तर्फबाट वकिल छन् ।
तपाईंमाथि कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप छ नि ?
तपाईंहरुले पनि मूल्यांकन गर्नुस् । भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्नुस् । मैले कति फस्र्योट गरिसकें । तपाईंहरु मैले गरेको कामको मूल्यांकन गर्नुस् । मैले राम्रो काम गरेकी छु कि छैन । मैले भन्ने कुरा होइन । मैले जे देखें त्यही गरें ।
ममाथि महाभियोग लगाएपछि अब उनीहरुले के गर्दै जान्छन्, हेरौं । अब अघि बढाउने उनीहरुले नै हो, मैले त केही गर्नु नै पर्दैन । अब मैले के गर्नु ! जेजे गर्छन उनीहरुले नै गर्लान् नि ।
तपाईंलाई कुनै राजनीतिक दबाब आएको थियो ?
त्यो त कति कति ! एकदमै राजनीतिक दबाब आउँथ्यो । अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा दसथरी सत्तामा जाने अनि सत्ताधारीले बातबातमा कुरा फेर्छन् । उनीहरुलाई मन नपरे सरकारी कर्मचारीलाई पनि निकाल्छन् । अनि अदालतले चाहिं उनीहरुले गरेको काम सबै राम्रो भनिदिनुपर्ने, उनीहरुको समर्थन गरिदिनुपर्ने । यस्तो पनि न्यायालय हुन्छ ?
भनेपछि राजनीतिक दबाब निकै आयो ?
उहाँहरुले भनेजस्तो हत्याहिंसाका मुद्दामा पनि कसैलाई दोषी देखाउनै नहुने अवस्था आयो । सबैलाई सफाइ दिनुपर्ने रे । थर्काएर मात्र होइन, फकाएर पनि दबाब नै आयो । जस्तो कि तपाईं महान् व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईंले गरेपछि सबै काम हुन्छ भन्नु पनि दबाब हो । कुनै प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक दलले रुलिङ गरेको कामलाई सदर गर्छ भने त्यो प्रधान न्यायाधीश नै हुन सक्दैन । निष्पक्ष निर्णय लिएकै कारण प्रधानमन्त्रीसँग झगडा हुने गर्छ । मैले नटेरेकै हो । नटेरेकै कारण महाभियोग लगाइएको हो। स्वतन्त्र न्यायापालिका हो । उनीहरुले दबाब दिए भन्दैमा मैले कानुनविपरीत काम गर्न मिल्छ र ! प्रचण्डजीले महाभियोगको दबाब दिएर मलाई भेट्नुस् भनेका थिए । मैले राजनीतिक दलका नेतालाई भेट्दिनँ, मलाई भेट्ने समय पनि छैन भनिदिएँ ।
न्यायालयलाई पनि यति दबाब आउँदो रैछ ?
कुरै छोड्नुस् । दबाब, प्रभाव, सबै कुरा न्यायालयमाथि छ । कतिपय न्यायाधीशलाई उचालेर मेरै विरुद्धमा पनि लगाइएको छ । महाभियोग लगाएर मैले गरेको काममा केही बाधा पुग्दैन ।
माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका पुराना नेता राधाकृष्ण मैनाली झापा आन्दोलन हुँदै तत्कालीन नेकपा मालेका जन्मदाता हुन् । वामपन्थी नेता मैनालीसँग दुईवटा पार्टी एकताका तीतामीठा अनुभव छन्ः एक- ०४७ साल चैतमा माले र मार्क्सवादीलाई मिसाएर नेकपा एमाले जन्माउँदाको मीठो अनुभव । अनि दोस्रो -०५६ को...
सन् १८७९ मा अमेरिकी रिपब्लिकनहरुको अखबार ‘शिकागो ट्रिब्युन’ का एक सम्वाददाताले कार्ल मार्क्ससँग उनको लण्डनस्थित आफ्नै घरमा अन्तर्वार्ता लिए । धेरै वर्षसम्म ‘ट्रिब्युन’ समाजवाद र उदीयमान ट्रेड युनियनहरु दुबैको भावनात्मक झड्काको बिस्फोटन बनेको थियो (तिनीहरु समान ठानिएका र हरेक रचनाले मार्क्सलाई विश्व षडयन्त्रको मास्टरमाइन्डको रुपमा स्थिर रुपले चरितार्थ गर्यो ।)...
छिट्टै पार्टी एकता गर्ने भन्दै एउटै घोषणापत्र बनाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडेका दुई वाम पार्टीहरु एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रियामा पछिल्लो समय केही आशंका उब्जिएको छ। दुई पार्टीको एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। पार्टी नेतृत्व र सरकार गठनका विषयमा पनि दुई...
पुस, काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रायले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गर्दै उनी भारतका असल मित्र एवं नेपालका अशल शासक भएको बताएका छन् । भारतीय पत्रिका दि वायरका लागि भारतीय पत्रकार माया मिरचाँदनीले लिएको भिडियो अन्तरवार्तामा पूर्वराजदूत रायले ओलीको मुक्तकण्ठले प्रश्ंसा...
मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं सांसद गगन थापाले शेरबहादुर देउवालाई स्वेच्छाले पार्टी सभापतिबाट विश्राम लिन र केन्द्रीय सदस्यमात्रै भएर बस्न आग्रह गरेका छन् । स्वेच्छाले जिम्मेवारी त्याग नगरे साथीहरुसँग मिलेर पार्टीभित्र हस्तक्षेप गरिने थापाले चुनौतीसमेत दिएका छन् । अनलाइनखबरसँगको विशेष अन्तरवार्तामा सांसद थापाले...
मंसिर, काठमाडौं । गुन्युचोलीमा सजिएकी युवतीको तस्वीर डा. बाबुराम भट्टराईकै ब्यानरको एक छेउमा देखिन्छ ।सडकमा यी युवती पनि अन्य उम्मेदवारहरुजस्तै माला र खादा लगाएर भोट माग्न व्यस्त भइन् । तर, यिनी महिला उम्मेदवार होइनन् र पुरुष उम्मेदवार पनि होइनन् । चुनावमा उनको एजेण्डा नै यस्तो रहेछ...